Sadexda Ilmaadeerka Ahi Inay Isku Tanaasulaan Waxa Ka Dhaw Inay U Tanaasulaan Dr. Axmed Kijaandhe.
Muj Cali Guray |
Muj Cali Guray
Hargeysa(GNN):-gudoomiye ku xigeenka sadexaad ee xisbiga mucaaridka ah ee Ucid Cali Maxamed Yuusuf(Cali Guray) ayaa ka hadlay tartanka ka dhex taagan xisbiga muxaafidka ah ee Kulmiye.
Mujaahid Cali Guray oo qoraal uu arintaas kaga hadlay soo dhigay bogiisa Face-book ayaa waxa kale oo uu sheegay inuu musharax Maxamed Cabdi Kijandhe ka fursad fiican yahay musharixiinta kale eek u loolamaya xisbiga Kulmiye.
Qoraalka uu arintaas kaga hadlay mujaahid Cali Guray ayaa u dhignaa sidan “Wax walba ka yaab. Dr kijaandhe musqaro maaha kuwa ugu rejeda fiican in uu ka mid yahay ayaan rumaysanahay. Intay sedexdani isku mashquulasan yihiin way dhici kartaa marka khaati laga joogsado inu noqdo ka keliya ee la isugu tagi karo mar hadii aanu odaygu kala furan
karayn oo aanu lahayn kuligiinaba jooga aniga ayaa taagan eh. Gaar ahaan sedexda ilma adeerka ah inay isu tanaasulaan waxa ka dhaw inay u tanaasulaan Dr Axmed Kijaandhe balse lagama yaabo inay iyagu isu tanaasulaan. Reeraha waawayn ee kale laftooda waxa jira sababo kala duwan oy kijaandhe ku taageeri karaan siba Garxajis, Dhulbahante, Warsangeli, iyo Ciise. Markaa Habar Awal, Habarjelo, iyo Gadabuursi ma ka heli karaa taageero xubnaha kaga jira Golaha Dhexe ee Kulmiye? Shakhsi ahaan waxan is leeyahay ku qadi maayo mar hadii aanu jirin musharax kale oy ku midaysan yihiin. Markaa saaxiibkay Kijaandhe dab yar ma shidayo”.